PerfectBanner: fanandramana, fanatsarana ary fanamoriana ho an'ny doka Banner | Martech Zone
Manana isika dokam-barotra amin'ny banner ao amin'ny tranokalanay ary matetika aho no tsy maintsy mankasitraka doka marobe momba ny mpanao dokam-barotra tena mahay. Tsapan'izy ireo fa tsy hampiasa tanteraka ny fifamoivoizana eto izy ireo raha tsy manandrana sy manatsara ny doka amin'ny sora-baventy.
Asa sarotra izany amin'ny ankamaroan'ny rafitra, ao anatin'izany ny Google. Tsy maintsy mampakatra tranga maro ianao, avy eo avelao izy ireo hihazakazaka lava hahitana ny fahamendrehan'ny statistika (izay mety maharitra raha ambany ny tahan'ny click-through), ampidino ary hizaha ny fiovanao manaraka, avy eo tohizo ny tsingerina. Raha tsy eo an-tampon'ny zavatra ianao, dia mety maharitra elaela izany.
Perfectbanner manatsara ny singa mamorona doka momba ny doka amin'ny AdWords, ao anatin'izany ny loko, sary, hafatra ary maro hafa. Ny algorithm nataon'izy ireo dia nanatsara ny tahan'ny fiovam-po amin'ny dokambarotra fampisehoana 30-179% ho an'ny mpanjifany.
Seho fitsapana Perfectbanner Display Ad
Haingam-pandeha Generator Banner - Namboarina manokana hamoronana sora-baventy ary hanatsara azy ireo ho azy, ny mpamorona sora-baventy dia hamela anao hamorona doka ary hametraka fitsapana vetivety.
Algorithmin'ny fitsapana miverina - Raha tokony hitady mpandresy isika, ny algorithm dia mamantatra sy mandatsaka ny fiovaovan'ny sorabaventy very, amin'izay dia hampiakatra be ny fampisehoana antonony.
Machine Learning - Ny algorithm an'i Perfectbanner dia mihamatanjaka amin'ny alàlan'ny angona manan-tantara bebe kokoa ary afaka, ohatra, mianatra hoe iza amin'ireo loko no miteraka tsindry betsaka indrindra. Arakaraky ny hampiasanao azy no mahaizina azy sy tsara kokoa.
Filaharana fitsapana mandeha ho azy - Ny algorithm dia mampihatra avy hatrany ny fiovan'ny fandresena amin'ny fitsapana iray mankany amin'ny manaraka, mandra-pamoakany ny sora-baventy tonga lafatra.
Mora ampiasaina - Mpanamboatra sora-baventy natao injeniera manokana, mpizara doka natokana ho azy ary algorithm manatsara hatrany hatrany no miara-miasa mba hahamora sy mahomby ho anao.
Ny vidiny dia mandroso, ny (US) $ 0.02 / CPM eo ambanin'ny 150kb sy $ 0.02 / GB mihoatra ny 150kb ihany. Manolotra fampiantranoana CDN $ 0.10 / GB ihany koa izy ireo.
The Perfectbanner Ny sehatra dia tafiditra ao anaty tambajotra doka lehibe hafa, ao anatin'izany ny adgear, adgenius, AdMarvel, AdRoll, adSpeed, ADTECH, Adtraction, adrecord, advert service, AdXpansion, adzerk, Affiliator, appnexus, atlas avy amin'ny Facebook, bidtheatre, choozle, criteo, cxense , DataXu, Delta Projects, dime DSP, Double.net, Doubleclick nataon'i Google, ohatra, miditra amin'ny BDR, epom, EroAdvertising, exoClick, Flurry, HasOffers, Mads, MediaMath, mopub, myaffiliates, NetRefer, OpenX, Perfect Audien, Pointroll, Rakuten Marketing, ReachLocal, Revive, Sitescout, Sizmek, Smart Ad Server, SpecificMedia, theTradeDesk, Tradedoubler, TradeTracker, TrafficForce, Undertone, Voluum, Xaxis, ary Zedo (miaraka amin'ny manaraka).
Tags: ab testingsora-baventy dokaadgearadgeniusAdMarveladrecordadrolladSpeedadtechFandraisanadokambarotra manompoAdXpansionadzerkAffiliatorappnexusatlas avy amin'ny Facebookdokam-barotra amin'ny bannerbidtheatrechoozlecriteocxenseDataXuDelta Projectsdime DSPmampiseho dokaDouble.netDoubleclick nataon'i Googleegassmandray anjara amin'ny BDRepomEroAdvertisingexoClickmaimaikaHasOffersMadsMediaMathmopubfanandramana marobemyaffiliatesNetReferOpenXMpihaino marim-pototratonga lafatraPointrollRakuten MarketingmahatratraVelomySitescoutSizmekSmart Server ServerSpecificMediafitilianatheTradeDeskTradedoublerTradeTrackerTrafficForcemoramoraVoluumXaxisZedo